उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विषादी परीक्षण सुरु - Ratopati
उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विषादी परीक्षण सुरु
पुस २७ ललितपुर-किसानले विषादी हालेको तरकारी कालीमाटी बाहेक अरु बजारमा बिक्री गर्न थालेपछि बाली संरक्षण निर्देशनालयले उपत्यकाका अन्य स्थानमा समेत विषादी परीक्षण सुरु गरेको छ । उपत्यकामा तरकारी र फलफूल भित्रने नाकालाई लक्षित गरेर परीक्षण थालिएको बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिए ।
कालीमाटीस्थित तरकारी तथा फलफूल बजारमा दुई वर्षदेखि विषादी अवशेष द्रूत विश्लेषण इकाइको स्थापना गरेर नियमित परीक्षण गरिँदै आएको छ । परीक्षण सुरु हुँदा दैनिक तीन÷चार वटासम्म नमुनामा विषादी पाइए पनि अहिले महिनाको एक/दुईवटा नमुनामा मात्रै विषादी पाइन थालेको शर्मा बताउछन् । नेपालमा अत्यन्त घातक मानिने १६ वटा विषादी प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँमा आइसक्रिमको पर्व (फोटोफिचर)
विजु महर्जन काठमाडौँ, जेठ १० – गर्मीको मौसममा आइसक्रिम मन नपराउनेको होला ? आइसक्रिम हरेक पुस्ताको रोजाईमा पर्छ..
कृष्ण अधिकारी काठमाडौँ, ९ जेठ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना बोकेर दुई वर्षअघि राजधानी छिरेकी नवलपरासी गैँडाको..
नवजात शिशुको अकालमै मृत्यु हुने दर घट्यो
चितवन, ९ जेठ । यहाँको सरकारी अस्पतालमा शिशु सघन उपचार कक्ष स्थापनासँगै नवजात शिशुको अकालमै मृत्यु हुने दर घटेक..
एजेन्सी जेठ ४ – हुन त दुध पिउनु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । तर नेशनल इन्स्टिच्युट अफ आयुर्वेद, नि..
तीस वर्ष पुग्नुभयो ? अब तपाईंलाई आवश्यक छ यी १० आहारा
एजेन्सी जेठ ३ – द नेशनल डाइट एण्ड न्यूट्रिशन सर्वेका अनुसार ३० वर्ष पार गरेपछि धेरैजसोलाई आवश्यक पोषक तत्व जस्..
कति उत्तम छ यो बोल्ने खालको ‘सेक्स डल’
जेन वेकफिल्ड/बीबीसी जेठ २ – हर्मनी एक नयाँ प्रकारको ‘सेक्स डल’ हो जुन हिँड्न सक्छ र कुराकानी पनि गर्न सक्छ । य..
नेपालमा पहिलोपटक मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अङ्ग प्रत्यारोपण
कल्पना पौडेल काठमाडौँ, ३१ वैशाख । नेपालमा चिकित्साविज्ञानको क्षेत्रमा पहिलो पटक मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको..